सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु [फोटो फिचर] स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु गरिएको छ। रथयात्राका लागि दिउँसो ४ बजे केलटोलबाट देवताको खट दरबारमार्गस्थित तीनधारा पाठशालाअघि लगिएको थियो। जात्रामा सहभागी हुनेले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सेतो मच्छेन्द्रनाथ रथ व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। जात्राका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागसँगको सहकार्यमा निःशुल्क मास्क दिने व्यवस्था मिलाइएको हो । आयोमेल संवाददाता
यस्तो देखियो जनकपुरमा चैते छठ (फोटो फिचर)
चार दिनसम्म मनाइने चैते छठको तेस्रो दिन आइतबार अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अघ्र्य दिएर पूजाअर्चना गरिएको छ। चैत छठको अवसरमा जनकपुरका जलासयहरूमा श्रद्धालुको चहलपलह देखिएको छ। आयोमेल संवाददाता
१९ तस्बिरमा २०७७ साल
वर्षभरि नै सत्तारुढ दलभित्र किचलो भयो। त्यही विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा दुई महिना बहस भयो । अन्ततः फागुन १३ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो। त्यसपछि फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताउनेफैसला गर्यो। संसद पुनःस्थापनापछि पनि नेपाली राजनीतिमा अन्योल कायमै छ। सँगै, एमालेको विवाद उस्तै छ। आयोमेल संवाददाता
यस्तो देखियो काठमाडौंमा पत्रकार महासंघको निर्वाचन
महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा र विभिन्न प्रतिष्ठान तथा एसोसिएटमा नयाँ नेतृत्वका लागि १३ हजार १२२ सदस्यले एकसाथ मतदान गर्दैछन्। बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। मतदान सम्पन्न भएपश्चात बुधबार नै मतगणना सुरु गरिने छ। दिनेश गाेले
कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच आज हिमाली र पहाडी जिल्लामा फागु पूर्णिमा अर्थात् होली मनाइँदैछ । छिमेकी भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा बढेको र सरकारले पनि घरमै बसेर मनाउन आग्रह गरेको स्थितिमा यसपटकको होली पनि फिक्का भएको छ। दिनेश गाेले
विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गएकाले फागु पर्वमा पानी र रङ प्रयोग नगर्न प्रशासनले आह्वान गरेको छ। साथै घर परिवारमै फागु पूर्णिमा मनाउन पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। दिनेश गाेले
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेश प्रस्थान गरेकी छिन्। उनी आज बिहान ८:४० बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानमार्फत राजधानी ढाका प्रस्थान गरेकी हुन्। आयोमेल संवाददाता
विधिपूर्वक चीर उठाएपछि काठमाडौंमा सुरु भयो होली [फाेटाे फिचर]
काठमाडौंको वसन्तपुरमा विधिपूर्वक चीर उठाइएको छ। होली सुरु हुनुअघि एक साताअघि वसन्तपुर विभिन्न रंगीचंगी ध्वजासहितको चीर ठड्याइन्छ। यो चीर ठड्याएपछि काठमाडौंमा विधिवतरूपमा होली सुरु भएको मानिन्छ। आयोमेल संवाददाता
तस्बिरमा यस्तो देखियो नेपाल-खनाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
नेकपा एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेला सुरु भएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा सुरु भएको भेला बिहीबारसम्म चल्नेछ। सुजन श्रेष्ठ
यस्तो देखियो प्रधानमन्त्री ओलीको चियापान समारोह
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आज चियापान समारोहको आयोजना गरेका छन्। समारोहमा पार्टीका केन्द्रीय नेताकासाथै माधव नेपाल समूहका नेता तथा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई पनि बोलाइएको छ। दिनेश गाेले
संसदीय व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै वैद्य माओवादीको प्रदर्शन [फोटो फिचर]
वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको खारेजी र संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का विभिन्न जनवर्गीय संगठनले आइतबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनपछि रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा आयोजित सभामा अध्यक्ष वैद्यलगायतका नेताहरुले बोलेका थिए। आयोमेल संवाददाता
शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ [१५ तस्बिरमा]
पशुपतिनाथ मन्दिरमा एक घण्टाभित्र दर्शन गरेर फर्कन सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। बेलुकीसम्म करिब आठ लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको छ। आज राति दर्शनार्थी आएसम्म मन्दिर खुला रहने जनाइएको छ। सुजन श्रेष्ठ
शिवरात्रिको विन्दास साँझ [फोटो फिचर]
प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव भगवान् शिवको विधिपूर्वक पूजा–आराधना गरी बिहीबार देशभर मनाइँदैछ। शिवरात्रिमा नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट साधुसन्त तथा नागाबाबाहरु पशुपतिनाथ आइपुगेका छन्। शिवरात्रिको अघिल्लो साँझ साधुसन्त कस्तो अवस्थामा भेटिए । क्यामरामा उतारेका छन् आयोमेलकर्मी सुजन श्रेष्ठले। सुजन श्रेष्ठ
पेरिसडाँडामा छायाे सन्नाटा ! [फाेटाे फिचर]
प्रचण्ड–माधव पक्षको पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको माहोल भने रंगहीनजस्तै देखिन्थ्यो। पहिलेका बैठकहरुमा अलग्गै ऊर्जा बोकेर आउने नेता–कार्यकर्ताहरुमा सोमबार त्यस्तो अवस्थामा देखिएनन्। करिब सन्नाटा छाएजस्तो देखिन्थ्यो पेरिसडाँडा परिसर। सम्भवतः फैसलाकै असरका कारण शीर्ष नेताबाहेक एमालेका कार्यकर्ताहरु देखिएनन्। आयोमेल संवाददाता
सरकार! प्याडमा ट्याक्स किन? (फोटो फिचर)
१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। संरक्षक समूह नेपालको अगुवाइमा प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका सहभागीहरुले सेनेटरी प्याडमा सरकारले लगाएको करको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले सरकारलाई नेपालमा प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। सुजन श्रेष्ठ
कोरोना खोपमा ज्येष्ठ नागरिकको उत्साह [फोटो फिचर]
दोस्रो चरणको खोप अभियानअन्तर्गत आजदेखि ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइँदैछ । आज ६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रमा दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको हो। काठमाडौंको सिभिल अस्पतालस्थित खोप केन्द्रको दृश्य उतारेका छन् आयोमेलकर्मी सुजन श्रेष्ठले। आयोमेल संवाददाता
सुन्दरीजल आइपुग्यो मेलम्चीको पानी [फाेटाे फिचर]
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा खसेको छ। गत फागुन १० गते परीक्षणका लागि सुरुङमा पानी हालिएकोमा आज सुन्दरीजल आइपुगेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीच थिचेसँगै प्रशोधन केन्द्रमा पानी झरेको हो। आयोमेल संवाददाता
'हामी म्यानमारका जनताको साथमा छौं' (फोटो फिचर)
बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाइमा म्यानमारमा भएको नरसंहारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। म्यानमारमा सैनिकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारीमाथि गरेको नरसंहारविरुद्ध ललितपुरको नख्खुस्थित म्यानमारको दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो। सुजन श्रेष्ठ
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै सांसद (फोटो फिचर)
सभामुखसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई आज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइँदैछ। काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा आज बिहान १० बजेदेखि सांसदलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो। आयोमेल संवाददाता
सडक विस्तारविरुद्ध उत्रिएकालाई अदालत लगिँदै, माइतीघरमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)
सडक विस्तार गर्ने नाममा आफ्नो उठिबास बनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर आज अदालत पेश गर्ने भएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुजन श्रेष्ठ